Ikhaya STARS E-EUROPE Ayoze Perez Ubuntwana Indaba Plus Untold Biography Facts
Ayoze Perez Ubuntwana Indaba Plus Untold Biography Facts. Isikweletu ku-SportsMole no-Instagram
I-LB inikeza iNdaba ephelele ye-Football Genius eyaziwa ngegama; "Ayo". Indaba yethu ye-Ayoze Perez Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokubantwana kuze kube yimanje.
I-Ayoze Perez Ingane Yobuntwana- Ukuhlaziywa Kwaze Kwafika. Isikweletu ku-Alchetron neNjongo
Yebo, wonke umuntu uyazi ngezinga lakhe elihlukile ekuvumelaneni nanoma yisiphi isikhundla sokuhlasela esenza "Mr Reliable". Kodwa-ke, isandla esincane kuphela abalandeli bebhola ababhekene neByography ka-Ayoze Perez okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
Ayoze Perez Ubuntwana Indaba Plus Untold Biography Facts- Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Ukuqala, amagama akhe aphelele ngu-Ayoze Pérez Gutiérrez. U-Ayoze Perez njengoba ayevame ukubiza wazalwa ngo-23 July 1993 eSanta Cruz de Tenerife, eSpain. Ngaphansi kwesithombe esithandekayo sabazali baka-Ayoze Perez abangamalungu aseCanary Islands asegwini olusenyakatho-ntshonalanga ye-Afrika.
Abazali baka-Ayoze Perez. Isikweletu ku-Instagram
Ngokuphambene nalokho abalandeli abaningi bakholelwayo, umndeni ka-Ayoze Perez usuka e-West African Island kude neSpain. Isiqhingi saso sihlangene yiSpain futhi sise-the I-Atlantic Ocean, Amakhilomitha angu-100 entshonalanga Morocco okuyinto iphuzu eliseduze kakhulu.
Imvelaphi Yomndeni ka-Ayoze Perez noMsuka. Isikweletu sokuhamba no-MJ, i-Premier League ne-Wikipedia.
Ekhulela emlandweni womndeni ophakathi, u-Ayoze wachitha isikhathi esiningi nomfowabo omkhulu ogama lakhe linguSamuel noma uSammy efanekiselwa ngezansi nomfowabo omncane nabazali.
Umndeni ka-Ayoze Perez. Isikweletu ku-Instagram
U-Ayoze Perez naye wakhulela endlini yenkolo, evela egatsheni lamaKatolika lamaKatolika lamaKatolika okuyinto eyinhlangano enkulu yenkolo eyenza i-84.9% yabakhileyo eTenerife.
Ayoze Perez Ubuntwana Indaba Plus Untold Biography Facts- I-Education ne-Career Buildup
U-Ayoze Perez obonisiwe washiya, umfowabo uSamuel ufanise kahle. Isikweletu ku-Instagram
Ngesikhathi se-1990 sekwephuzile, isiqhingi esilala saseTenerife sasizophazamiseka njalo ngomsindo webhola owenziwa u-Ayoze nomfowabo omkhulu uSammy. Ngesikhathi besakhula, lo mbhangqwana wadlala ibhola ndawonye nsuku zonke kokubili enkundleni nasemakhaya abo eMndeni.
Labo ababebazi ngaleso sikhathi bangachaza bobabili abafana njengezinkanyezi zesikhathi esizayo ababenokuxhumana okuyingqayizivele nokuqonda kwe-telepathic ku-gameplay yabo. Ekuqaleni, bobabili abafana baphila iphupho lokuthola imfundo yebhola ngezikole. Njengokunye okusetshenziselwa umkhuba wokudubula wangaphakathi, abazali baka-Ayoze Perez banquma ukuthukuthelisa amadodana abo esikoleni esidumile saseTenerife, i-CD San ​​Andrés.
Ayoze Perez Ubuntwana Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Umdlandla webhola kanye nesidingo sokubonisa amathalenta abo wabona bobabili u-Ayoze noSammy ababhalisele ohlwini lwazo lwendawo, i-CD San ​​Andrés.
Ngesikhathi u-Ayoze edlala njengomdlali ohlasela, umfowabo omdala uSamuel wadlala phambili. Abazali babo bavuma ukuthi bobabili amadodana bazodlala eqenjini elifanayo ukuze bahlale ndawonye. Ukuqala ukuhlangana ndawonye eqenjini elifanayo ngokuncintisana kubona i-Ayoze idlala nabadlali abakhulu abenza ukuthi ikhule ngokuvuthiwe.
Ngemuva kokuchitha iminyaka engu-4 e-CD San ​​Andrés, u-Ayoze osemusha waya e-UD Santa Cruz, esikoleni esidumile sokudlala abadlali abasha e-Tenerife academy, okuyiyona eyona yezemidlalo ezinkulu zeScott Island.
Ayoze Perez Ubuntwana Indaba Plus Untold Biography Facts- Umgwaqo oDumela Igama
Isifiso sika-Ayoze kanye nemithandazo yokuba ngumdlali webhola ephezulu neTenerife akahambanga ukudlula fancy.
I-Ayoze Perez's Road to Fame Story. I-Credit to World Soccer
Unyaka u-2011 no-2012 bawuphawu lokushintsha emsebenzini wakhe omncane. Kwakuwunyaka athola ukuthuthukiswa ku-Tenerife B no-A ngokulandelana.
Ukulahla i-Real Madrid ne-FC Barcelona:
Akuzange kuthathe isikhathi eside ukuba i-Ayoze iqale ukwenza umqondo nge-Tenerife. Ngo-Okthoba 2014, i-Ayoze inqobe i-Breakthrough Player ku-2013-14 Segunda División. Uphinde wanqoba umlingisi ongcono kakhulu we-Attacking emiklomelo ye-2013-14 Segunda Division.
U-Ayoze uphakamise izikhundla eziphezulu ngokushesha ngenxa yokusebenza kwakhe okumangalisayo eSigunda Division. Lokhu kubone I-Real Madrid neBarcelona bayidonsela nxazonke ehlobo lika-2014. Phakathi kwamaqembu amakhulu ayehlola, kwakunguNewcastle owabonisa ngempela isifiso sokusayina i-Ayoze.
Uthi bewazi?… U-Ayoze Perez umfowabo owayengumdlali webhola lezinyawo wanquma ukushiya iqembu lakhe ukuze alandele umfowabo eNgilandi enethemba lokuzilungisa eqenjini lapho. Laba bazalwane ababili abasuka eSanta Cruz enyakatho eTenerife baqaphela amaphupho abo eNewcastle.
Ayoze noSammy baphila amaphupho abo ndawonye. Isikweletu ku-Chronicle Live
Ayoze Perez Ubuntwana Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphakama Kumlando Wendaba
I-Newcastle ikhokhele imali engu-£ 2 million kuphela ye-Ayoze eyimali ye-karan emdlalweni wanamuhla. Lapho efika eNewcastle, u-Ayoze wathuthela esitokisini nomfowabo uSamuel.
Bobabili abazalwane kwakudingeka bafunde ukuzivumelanisa nomuzi, ulimi, abantu, isiko.
UPerez usho njalo. "Angizange ngibe nomqondo mayelana nendawo, lapho yayiseNgilandi, noma yini. Kwakumangalisa ukubona, nje ukuthi uNewcastle enhle kangakanani. Yebo, ngathuthela nomfowethu lapho ngifika lapha kuqala. Lapho nje ngisayine wathatha isinqumo sokuza nami, noh, angizange ngimbuze, uvele nje! Sibe ndawonye ndawonye yonke indlela. "
Kube yiminyaka emihle kubazalwane baseTyneside ababiza ngokuthi ikhaya. Kube khona izikhathi ezinhle, izikhathi ezimbi zebhola. Njengesikhathi sokubhala, umphakathi ohlasela unayo abe ophakeme futhi onamandla ekubambisaneni kwakhe okunzima Salomón Rondón.
I-Ayoze Perez Iphakamisa Udumo Indaba. Isikweletu ku-Chronicle Live
Njengo-Alan Shearer, u-Ayoze uzohlale ekhunjulwa njengenganekwane yaseNewcastle. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
Ayoze Perez Ubuntwana Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Ubudlelwano
Njengoba kuphakama u-Ayoze Perez udumo, umbuzo ngomlomo wonke umuntu ...Ubani intombi ka-Ayoze Perez, umfazi noma i-WAG?.
I-Ayoze's Girlfriend. Isikweletu ku-Instagram
Imithandazo efihlekile efihlekile ka-Ayoze Perez yilapho ehluleka ukuhlola iso lomphakathi ngoba nje impilo yakhe yothando iyimfihlo kakhulu. Phakathi neminyaka, u-Ayoze Perez uye wakhetha ukugxila emsebenzini wakhe futhi uye wazama ukugwema noma yikuphi ukukhanya empilweni yakhe yangasese. Leli qiniso lenza kube nzima kithi ukuba sibe nolwazi olukhonkolo mayelana nokuphila kwakhe kothando.
Kodwa-ke, ngokusho kombiko othembekile, u-Ayoze Perez ubelokhu ephethe intombi yakhe engaziwa engaphezu kweminyaka eyi-3 ngaphambi kokufaka isicelo. Ngokusho kwe-FootallImagines;
"U-Ayoze uPerez uqala ukude naye futhi ucabanga ukuthi uzohlukana naye, kodwa uhlela ukuphakamisa (ngemuva kokulandela umdlalo)." Kucatshangwa ukuthi kufanele bashade manje.
Ayoze Perez Ubuntwana Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Personal
Ukwazi impilo yomuntu u-Ayoze Perez kude nebhola kuzokukwenza uthole isithombe esiphelele kuye. Ukuqala, uPerez unesithakazelo, unomusa, unenhliziyo efudumele, ujabule. Lokhu kumenza abe ngumvini othandekayo ebhola.
Ukuqala, ungumuntu othole izihlonipho eziningi uma kuziwa emithwalweni yomphakathi nezingane.
Uthi bewazi?… UPerez uyisithunywa sesisekelo seNewcastle. Ngokuvamile, uphendukela esikoleni ukuze abambe iqhaza emphakathini nezingane ngokusebenzisa umxhwele webhola.
Ayoze Perez Personal Life Facts- Credit kuya Instagram
Ayoze Perez Ubuntwana Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Komndeni
Ukusuka eTenerife kuya eTyneside, umndeni ka-Ayoze Perez wathola ikhaya laseNewcastle ngenxa yokuphumelela kwendodana yabo encane. Ngezansi ividiyo ekhombisa umzuzwana wenjabulo enkulu kakhulu emndenini wasePerez njengoba begubha usuku lokuzalwa lelungu labo lomndeni eliphumelele kakhulu.
Ukuqaphela i-akhawunti ye-Ayoze yezokuxhumana nabantu kanye nevidiyo yomndeni ngenhla, uzobona kalula ukuthi usondelene kakhulu kunomama kunabobaba. Nokho, i-AyozeUkuzinikela ekuqinisekiseni ukuthi abazali bakhe bakhululekile futhi banelisekile kufana nokuzibophezela kwakhe ebhola.
Umama ka-Ayoze Perez. Isikweletu ku-Instagram
Okuningi mayelana noMfoweth 'wakhe: USamuel Pérez Gutiérrez wazalwa ngoMar 23, 1990 okusho ukuthi uneminyaka emithathu ubudala kunomfowabo u-Ayoze.
Umfowabo ka-Ayoze Perez- USamuel. Isikweletu ku-Instagram
I-Big Sammy izokhunjulwa kuze kube phakade njengomunye wabazalwane abanakekela kakhulu ebhola. Njengoba sekushiwo ngaphambili, wenza umhlatshelo omkhulu wokusiza umfowabo ukuba ahlale futhi ahlale enkampanini ngisho nalapho ephikisana nokuqondisa kwakhe emsebenzini ukuze afane nomfowabo.
Uthi bewazi?… USammy waba umdlali ongewona umdlalo lapho ehlala eNewcastle nomfowabo. Ngesikhathi u-Ayoze evuka ngokushesha kusukela ekufikeni kwakhe eTyneside ngoJune 2014 uyaziwa kahle, uhambo lomfowabo omdala lube luhle kakhulu futhi lube luhle kakhulu.
Mayelana no-Ayoze Perez Umhlobo: Akuwona wonke amadodana asilisa emndenini kaPerez angena ebhizinisini lebhola. Ngisho nomndeni owandisiwe. Uthi bewazi?… Umzala ka-Ayoze uMaría José Pérez njengesikhathi sokubhala phambili ku-Levante UD Femenino futhi naye uyilungu leqembu lezwe labesifazane baseSpain.
U-Ayoze Umzala kaPerez- uMaría José Pérez. Isikweletu ku-YouTube
Ukubheka ngokubukeka kwakhe, uzobona kalula ukuthi kufana nokufana nePerezs.
Ayoze Perez Ubuntwana Indaba Plus Untold Biography Facts- LifeStyle
Ngokusho kweTransferMarker, u-Ayoze Perez unenani lemakethe yamanje 10,00 Mill €. Umholo wakhe wamasonto onke we-£ 45,000 uyamenza abe ngumdlali webhola lezinyawo. Lokhu, kodwa, akudluliswanga ngendlela ehle kakhulu yokuphila.
I-Ayoze ihlakaniphile ngokuphatha izimali zakhe zebhola. Lokhu kusho ukuthi akudingeki uchithe njengobuqili, noma uguqule indlela yakhe yokuphila.
Izindaba ze-LifeStyle ze-Ayoze Perez. Isikweletu ku-Instagram
Ayoze Perez Ubuntwana Indaba Plus Untold Biography Facts- Amaqiniso angaziwa
Igama elithi "Ayoze"Kuvame ukuchazwa ngabalandeli abathile bebhola ukuthi bavela eNigeria. Leli gama lifana nesizwe sokukhuluma sase-Igbo sezwe laseNtshonalanga Afrika. Futhi, isidlaliso sika-Ayoze Perez "Ayo". Leli gama lesidlaliso liphinde lithwale isizwe esikhuluma isiJoruba saseNigeria
U-Ayoze Perez unombono wokubheka, icala elenza abalandeli nabalandeli be-Blogger baphutha ngokucabanga ukuthi isithombe esithile sikaSantiago Munez singe-Ayoze ebusheni bakhe.
Ayoze Perez Facts Untold - Mayelana nokubukeka kwakhe okufanayo. Isikweletu ku-Twitter
U-Ayoze Perez wazalelwa kuma-1990s okuvame ukukhunjulwa njengeminyaka eyishumi yokuchuma emhlabeni. Ngaphezu kwalokho, i-1990 yabona i-Soviet Union yawa futhi amaqembu omfana (I-Boyz II Men, i-Backstreet Boys ne-Westlife) lawula amashadi womculo.
Le minyaka eyishumi yabona ukuphakama kwe-Inthanethi (i-World Wide Web). Futhi ku-1990, umyalezo wokuqala wombhalo we-SMS uthunyelwe, ama-DVD asungulwa, i-Sony PlayStation ikhishwe futhi i-Google yasungulwa. Ekhuluma nge-PlayStation, i-Ayoze ingumlutha we-FIFA.
Ayoze Perez Facts Untold - Umthandi weFIFA. Isikweletu ku-Twitter
Njengamanje ngesikhathi sokubhala, i-Ayoze ibeka i-13 ku-scorers yengxenye yonke yamaphuzu kaNewcastle. Michael Owen kulandela okulandelayo.
I-Ayoze Perez's Newcastle Goal Scoring Rank. Isikweletu ku-Twitter
Ayoze Perez Ubuntwana Indaba Plus Untold Biography Facts- Isifinyezo sevidiyo
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Ayoze Perez Childhood Story kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
umzamo jonhera NgoJulayi 1, 2019 E-6: 16 pm
Ngifuna njalo ukuhlangabezana nama-ayoze
Im fan yakhe enkulu e-zimbabwe.